Momba anay - Rindrambaiko Digital Signage & rindrambaiko Wall Wall
Eny, olona tena isika! Mahafantatra bebe kokoa momba anay!
Patrice no mpanorina ny Easy Easy Display. Frantsay izy, Geek 45 taona ary manao teny mankafy ny teknolojia. Eto izy dia mitaingina bisikileta elektrisialy farany Cowboy ao Bruxelles.
Patrice dia mpandraharaha sahisahy ary efa namolavola ilay logiciel Vitrine Multimedia nandritra ny 15 taona mahery. Ny sasany amin'ireo mpanjifany dia Airbus, Unicef, Visa, Canon.
Herinandro faran'ny herinandro isan-taona dia maka fotoana ivelan'ny fandaharam-potoana mahazatra azy i Patrice Video Jockey.
Mpitarika ny orinasa
I Guy no mpitarika ny orinasa ho an'ny Easy Multi Display. Guy izay 44 taona dia mpamono loza, miaraka amina frantsay na Vietnam. Noheverin'i Guy ho zanany tsara ny fiainany! Io i Guy sy ny zanany vavy Iris ao amin'ny efitrano fampisehoana Brussels.
Taorian'ny 5 taona niasana ho mpikarakara tetik'asa IT ho an'ny Carrefour, nandritra ny 15 taona mahery izy dia niasa ho mpandraharaha nandritra ny XNUMX taona. Lehilahy mandeha mora i Guy izay te hifandray ary hanorina fifandraisana matanjaka. Nihaona i Guy sy Patrice, raha teo am-pitadiavana rindrambaiko famantarana ara-nomerika ho an'ny Ady Ady nomerika i Guy sy Patrice. Namana fisehoan-javatra izany teo aloha.
Na dia hitan'i Guy indraindray ho sarotra aza ny fiainana, taorian'ny fifanarahana miaraka amin'ny hery manokana, dia tiany ny teny filamatrana ...
- Iza no sahy mandresy. -
Raha te hifandray aminay ianao dia jereo ny "Mifandraisa aminay"pejy.
MISY FIKAROHANA FARANY